२०७६ असार १६ गते सोमवारको प्रतीक दैनिक
सखुवापरसौनीमा धान रोप्दै सिडिओले भने विदेशी चामल खान नपरोस्
प्रस, पचगाँवा, १५ असार/ पर्साको सखुवापरसौनी गाउँपालिका कृषि शाखाको आयोजनामा सखुवापरसौनी गाउँपालिका–१ खजुरियामा धान खेतीमा प्रविधि र यन्त्रीकरण चामल आयातमा न्यूनीकरण १६ औं राष्ट्रिय धान दिवस कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले घान रोपाइँ गरेर कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका थिए । सो अवसरमा प्रजिअ भट्टराईले पर्साका किसानलाई बाँझो खेत नराख्न सुझाव दिए । उनले प्राङ्गारिक मलबाट खेती गर्दा उत्पादन वृद्धि हुने बताए । किसानहरूलाई धान खेतीमा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्दा समय, खर्च बच्ने र उत्पादन बढी मुनाफा बढी हुने हुँदा सोतर्फ आकर्षित हुन सुझाए । उनले कृषि प्रधान देशका जनता विदेशबाट चामललगायत कृषि उपजमा आश्रित हुन लाजमर्दाे कुरा भएको बताए । उनले यस वर्ष धान उत्पादनमा बृद्धि गरेर विदेशी चामल खानुपर्ने अवस्था हटाउन किसानहरूसँग आग्रह गरे । प्रजिअले सरकारबाट पाउने अनुदान सहयोग सरल र सहज ढङ्गबाट उपलब्ध गराउन आप्mनो इमानदार प्रयास रहने बताए । सखुवापरसौनी गापाका अध्यक्ष प्रदिपकुमार जैसवालले खेत योग्य जमीन बाँझो राख्ने किसानला
हुलाकी सडक ठेकेदार कम्पनीको लापारवाहीले बाढी गाउँ पस्ने खतरा
प्रस, ठोरी, १५ असार/ वीरगंज–ठोरी हुलाकी सडक खण्ड अन्तर्गत ठोरी गाउँपालिका १ र २ वडामा ठेकेदार कम्पनीले सिएनजी मात्रै गरेर छाड्दा बाढी पस्ने खतरा बढेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साको आइतवार ध्यानाकर्षण गराइएको छ । हुलाकी राजमार्ग निर्माण सरोकार समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टराईलाई भेटेर ज्ञापनपत्र दिएको हो । समितिका संयोजक अर्जुनबहादुर बस्नेत, नेपाली कांग्रेस ठोरी गाउँपालिकाका संयोजक शम्भुराम पौडेल, जिल्ला सदस्य गोमा पौडेल, गोविन्द विष्टलगायतको टोलीले प्रजिअ भट्टराईलाई ज्ञापन बुझाएको हो । हुलाकी सडक ठेकेदारको लापरवाहीले बाढी गाउँ पस्ने खतरा बढेपछि ठोरीवासीमा त्रासमा परेको भन्दै यसको रोकथामका लागि काम अघि बढाउन पहलका लागि प्रजिअलाई अनुरोध गरिएको बस्नेतले बताए । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ–ठेकदार कम्पनीले सडक निर्माणका लागि शुरू गरेको सिएनजी भएर ठुटे, ढेडुलगायत खोलाको भेल बाढी बस्ती पसेर बगाउने खतरा बढेको छ । तत्काल उक्त खोलाको भेल–बाढी रोकथामका लागि ठेकेदारलाई जाली हाल्ने काम अघि बढाउन पहलीकदम गरिदिन ज्ञापनपत्रमा अनुरोध गरिएको छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रजिअ भ
बारा, पर्सा सिमानाको सडक निर्माण शुरू
गम्भीरा सहनी, जीतपुर, १५ असार/ बारा, पर्साको सिमानामा जीर्ण सडक निर्माण कार्य सुरू भएको छ । जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाबाट पश्चिमतर्फ पर्सा जिल्ला जोड्ने सडकको आइतवार शिलान्यास भएको छ । जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख डा. कृष्ण पौडेल र उपप्रमुख सरस्वती चौधरीले सडक निर्माण शिलान्यास गरेका हुन् । सडक निर्माणमा कुनै कमजोरी नगर्न आग्रह गर्दै मेयर डा. पौडेलले दुई जिल्लालाई जोड्ने मुख्य सडक भएकोले जिल्ला तथा उपमहानगरको गरिमा यस सडकसँग जोडिएको बताए । सो अवसरमा उपप्रमुख सरस्वती चौधरीले पनि सडक निर्माणको गुणस्तरमा जोड दिइन् । नगरको ४५ लाख लागतमा सडक निर्माण हुन लागेको उपभोक्ता समितिका सदस्य इरशाद खानले बताए । कार्यक्रममा वडा अध्यक्षहरू रामबाबू गुप्ता, असलम देवान, रसुल अंसारी, क्यामुद्दिन अंसारी, नगर उद्योग वणिज्य सङ्घ जीतपुरका अध्यक्ष सञ्जय साह, पूर्व गाविस अध्यक्ष देवनारायण चौधरी, समाजसेवी रामनिवास गुप्तालगायतको सहभागिता थियो ।
सिम्रौनगढ नपाको बजेट ५६ करोड
प्रस, सिम्रौनगढ, १५ असार/ ‘समृद्ध सिम्रौनगढ नगरपालिकाको सपना ः पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारको परिकल्पना’ भन्ने नाराका साथ आजदेखि सिम्रौनगढ नपाको तेस्रो नगरसभा शुरू भएको छ । सिम्रौनगढ नपा–५ उचिडिह स्वास्थ्यचौकीको सभाकक्षमा सम्पन्न नगरसभामा मेयर विजयशङ्कर यादवले आव ०७६–०७७ को अनुमानित रु ५६ करोड ९ लाख २३ हजारको बजेट पेश गरे । बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, सडक, नाला, फोहरमैला व्यवस्थापन, बसपार्कको निर्माण आदिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनीयोजन गरेको बताए । नगरसभा उद्घाटन कार्यक्रममा कलैया उपमहानगरपालिकाका मेयर राजेश यादव, सिम्रौनगढ नपाकी उपमेयर रीमादेवी कुशवाहा, उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष जयन्त कुशवाहालगायतले नगरसभा सफलताको लागि शुभकामना व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासैनीले स्वागत गरेका थिए भने योजना अधिकृत राजीव यादवले सहजीकरण गरेका थिए ।
वीरगंज महानगरपालिकामा आधारभूत शिक्षा
अनन्तकुमार लाल दास वीरगंज महानगरपालिका पुरानो शिक्षा केन्द्र हो । वर्तमान संविधानले स्थानीय तहलाई आधारभूत शिक्षाको सन्दर्भमा प्रशस्त अधिकार दिएको छ । त्यसले गर्दा जे कुरा महानगरपालिकाको कार्य क्षेत्रभित्र पर्दछ त्यसबारे बहुकोणीय विमर्श हुनु जरूरी छ । आधारभूत शिक्षालाई जनसामान्यले प्राथमिक शिक्षा भनेर अहिले पनि चिनारी दिन्छ । आधारभूत शिक्षा, शिक्षाको त्यो श्रेणी क्रम हो जसले जग बनाउने काम गर्छ । उसो त आजभोलि मात्र होइन, २००७ सालदेखि नै विभिन्न समय क्रममा वीरगंजमा विश्वविद्यालय खोल्ने चर्चा हुँदै आएको हो । यसबारे केही अध्ययन भएको छ । एउटा त साबिकको वीरगंज उपमहानगरपालिकाकै शिक्षा समिति मार्पmत अध्ययन भएको हो । प्रसिद्ध शिक्षाविद् स्वर्गीय मोहनप्रसाद लाखेको संयोजकत्वमा त्यो अध्ययन भएको थियो । त्यसैगरी हरिखेतान बहुमुखी क्याम्पसका डा. भगवान यादवको सहजीकरणमा वीरगंज विश्वविद्यालय निर्माणका लागि सङ्गठितरूपमा लामो कसरत भएको छ । निजी क्षेत्रबाट करीब बीस वर्ष पहिले प्रतिष्ठित केडिया समूहको पहलमा बृजलाल केडिया विश्वविद्यालयको परिकल्पना अगाडि आएको थियो । विभिन्न कोणबाट गणेशमान सिंह खुला विश्वव
प्रदेश २ पर्यटन
कुनै पनि उद्देश्यका साथ आप्mनो घर र गाउँ–टोलभन्दा बाहिर निस्कने जो कोही व्यक्ति गन्तव्य स्थलका लागि पर्यटक वा पाहुना हो । अर्थात् उद्देश्यका साथ वैधानिक तरिकाले यात्रारत जो कोही यात्रु पर्यटक हो । अर्थशास्त्रीहरू पर्यटकलाई पैसासँग जोडेर हेर्छन् । परम्परागत परिभाषा अनुसार आर्थिक क्रियाकलापविना यात्रु पर्यटक होइन । जसबाट पर्यटन व्यवसायलाई प्रत्यक्ष फाइदा छैन । तर अव परिभाषा बदलिएको छ–‘यात्राको क्रममा कुनै खर्च नगर्ने वा खर्च गर्न नसक्ने यात्रु पनि पर्यटक हो ।’ उनीहरूले आपूm पुगेको स्थानको महŒवपूर्ण सन्देश प्रत्यक्ष तथा परोक्ष प्रचारप्रसार गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरूको कुरावाट कैयन नयाँ पर्यटक त्यस ठाउँमा जान अभिप्रेरित हुन्छन् । यसर्थ हरेक यात्रु महŒवपूर्ण पर्यटक हो । पर्यटन व्यवसायीले उनीहरूसँग जहिले पनि सकारात्मक र सहयोगी एवं सद्भावपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्छ । जुन स्थान धेरै पक्ष्Fको गन्तव्य बन्न लायक छ त्यहाँ पर्यटन व्यवसाय फस्टाउन सक्छ । वर्तमान अवस्थमा मानवका इच्छा, आकाङ्क्ष्Fा र उद्देश्य विभिन्न हुन्छन् । एकलाई मन नपर्ने स्थान अर्कोलाई मन पर्न सक्छ । ग्रामीण वातावरणमा लामो समय ब
२०७६ असार १५ गते आइतवारको प्रतीक दैनिक
प्रदेश २ मा पर्यटन विकासबारे अन्तक्र्रिया
प्रस, वीरगंज, १४ असार/ प्रदेश नं २ का पर्यटकीय क्षेत्रको विकासको लागि नेपाल पर्यटन बोर्डको आयोजनामा शनिवार वीरगंजमा अन्तत्र्रिmया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा आगामी वर्षको लागि नेपाल पर्यटन बोर्डले ल्याउन लागेको बजेट तथा कार्यक्रमबारे प्रदेश नं २ का पर्यटन क्षेत्रसँग आबद्ध सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि एवं सरोकारवाला पक्षहरूसँग अन्तत्र्रिmया गरिएको थियो । ओझेलमा परेको मधेसका ऐतिहासिक तथा धार्मिक महŒवका पर्यटकीयस्थलहरूको प्रवद्र्धन गरी भ्रमण नेपाल २०२० लाई सफल बनाउन सकिने बोर्डका अधिकारीहरूको भनाइ थियो । बोर्ड सञ्चालक समितिका सदस्य दीपक महतले यहाँका पर्यटकीय स्थलहरूमा विदेशी पर्यटकहरूको आगमन बढाइने बताउँदै पर्यटन बोर्ड अहिले विविध समस्याबाट गुज्रिरहेको कारण सोचे जति काम हुन नसकेको खुलासा गरे । तराई–मधेस खुल्ला सीमा नाका भएकोले भारतीयलगायत तेस्रो मुलुकका पर्यटकहरूलाई भिœयाउन तीन तहका सरकारको ध्यान पुग्नुपर्ने उनले जोड दिए । विदेशी पाहुना भिœयाउन मधेसका ऐतिहासिक धरोहरहरूले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने ठोकुवा गर्दै वीरगंज महानगरका प्रमुख विजयकुमार सरावग
शिक्षाको स्तर सुधार नभएसम्म मधेसको विकास असम्भव –सांसद यादव
प्रस, वीरगंज, १४ असार/ सङ्घीय शिक्षक फोरम नेपालको तेस्रो जिल्ला अधिवेशन शनिवार त्रिजुद्ध माविमा शुरू भएको छ । पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं १ का सांसद प्रदीप यादवले कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै शिक्षाको स्तर सुधार नभएसम्म मधेसको विकास हुन नसक्ने बताए । सरकारले शिक्षा नीतिमा गरेको भेदभाव सबैलाई थाहा भएपनि इमानदारीका साथ मधेसका शिक्षकहरूले कार्य नगर्दा प्रदेश २ मा शिक्षाको अवस्था कमजोर रहेको बताए । नेपालको तथ्याङ्कमा प्रदेश २ शिक्षामा सबैभन्दा बढी पछि पर्नुको कारण शिक्षकसँगै अभिभावक पनि रहेको उनको आरोप थियो । फरक प्रसङ्गमा सांसद यादवले पार्टी नेतृत्वले बाहिरी दबाब सहन नसकेर आपूmलाई निलम्बन गरेको जानकारी गराए । पार्टीको निर्णयलाई आपूmले सहर्ष स्वीकार गरेको बताउँदै पार्टीको कामको निरन्तरतामा कुनै कमी नराख्ने बताए । कार्यक्रममा वीरगंज महानगरका मेयर विजयकुमार सरावगी, प्रदेशसभा सदस्य प्रह्लाद गिरी, पार्टी पर्साका सहअध्यक्ष रामनरेश यादव, सुन्दरप्रसाद कुर्मी, महानगरका शिक्षा महाशाखा प्रमुख अरविन्दलाल कर्ण, जिल्ला शिक्षा एकाइ प्रमुख हरिराउत कुर्मी, शिक्षक महासङ्घ पर्साका अध्यक्
ब्लोदान र राजपाद्वारा आकस्मिक रक्तदान, ६ जना महिलासहित १७२ जना सहभागी
प्रस, वीरगंज, १४ असार/ रक्त सञ्चार केन्द्र वीरगंजमा रगत अभाव भएपछि शनिवार वीरगंजमा ब्लोदानसँग आबद्ध आकस्मिक रक्तदाता क्लब तथा राजपा नेपाल पर्साले दुई छुट्टाछुट्टै स्थानमा आयोजना गरेको आकस्मिक रक्तदान कार्यक्रमबाट १७२ पिन्ट रगत सङ्कलन भएको रक्त सञ्चार केन्द्र वीरगंजका प्रमुख सौरभराज पाण्डेयले बताए । राजपा नेपाल पर्साले रक्त सञ्चार केन्द्रमा गरेको आकस्मिक रक्तदानमा २ महिलासहित १०४ जनाले रक्तदान गरेको राजपाका महासचिव राजेशमान सिंहले बताए । कार्यक्रममा रमेश पटेल, मुकेश साह, रोशन कुमार, सलाउद्दीन मन्सुरी, प्रमोद महतो, समीर मियाँ धोबी, रवीन्द्र चौरसिया, नन्दकिशोर यादव, राजेन्द्र चौरसिया, जाफर अन्सारी, अफरोज आलम, सन्दीप गुप्ता, सुरेशमान सिंह, सद्दाम हुसेन, पैmयाज आलमलगायतले रक्तदान गरेका थिए । कार्यक्रममा राजपा पर्साका अध्यक्ष प्रेमबाबू पटेल, वीरेन्द्र यादव, सचिव उमेशलाल सहनी, मुस्लिम नेता खैरुद्दीन हवारी, युवा नेता अमित यादवलगायतको सहभागिता थियो । यसैगरी, आकस्मिक रक्तदाता क्लबले टिबडेवाला विवाह भवनमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा ४ महिलासहित ६८ जनाले रक्तदान गरेको रक्त सञ्चार केन्द्
सर्प धपाउँदा घर जल्यो
प्रस, पँचगावाँ, १४ असार/ पटेर्वासुगौली गाउँपालिका वडा नं ५ निचुटा बेलवास्थित मैनुद्दीन मियाँ दर्जीको फुसको घरमा सर्प पसेपछि धपाउन आगो बाल्दा घर जलेर नष्ट भएको छ । आगलागीबाट घरभित्रका सम्पूर्ण धनमाल जलेर नष्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ । फुसको घर भएकोले छिट्टै आगो सल्केको हुँदा कुनै पनि सामान निकाल्ने समय नपाएको टोलछिमेकका बासिन्दाले बताए । आगलागीमा करीब १ लाख मूल्यबराबरको क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
अतिक्रमित वन क्षेत्र फिर्ता गरी वृक्षरोपण
प्रस, पर्सागढी, १४ असार/ राष्ट्रिय वृक्षरोपण दिवसको अवसरमा डिभिजन वन कार्यालय पर्साको आयोजनामा पर्सागढी नगरपालिकास्थित सबैया साझेदारी वन क्षेत्रमा फलपूmलका बिरुवा रोपण गरिएको छ । करीब डेढ बिघा अतिक्रमित वन क्षेत्र वनले आप्mनो नियन्त्रणमा लिएर फलपूmलका बिरुवा रोपण गरेको हो । आँपको २००, लिचीको १००, कटहरको ५०, अमलाको ५० गरी जम्मा ४०० बिरुवा रोपिएको डिभिजन वन कार्यालय पर्साले जनाएको छ । वृक्षरोपण कार्यक्रमको शुभारम्भ प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले गरेका थिए । डिभिजन वनका प्रमुख राजेश्वरमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सबैया साझेदारी वन कार्यालय सबैयाका वन व्यवस्थापन अध्यक्ष लखनलाल साह, राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रउ कुमार खड्का, कोलेनिकाका प्रमुख लक्ष्मण पौडेल, वडाध्यक्ष समसुद्दीन साह देवानलगायतको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा स्वागत इलाका वन कार्यालय सोलखपुरका सहायक वन अधिकृत रामपुकार यादवले र सहजीकरण मधुवन मथवल सेक्टर वन बढनिहारका सहायक वन अधिकृत फरमान मियाँले गरेका थिए ।
प्रस, पँचगावाँ, १४ असार/ सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका वडा नं १ बस्ने वर्ष ५८ की चन्तारा देवीको शनिवार करेन्ट लागेर ज्यान गएको छ । गोठमा काम गर्ने क्रममा भूलवश नाङ्गो तार छोएपछि करेन्ट लागी उनी गम्भीर घाइते भएकी थिइन् । उपचारको लागि वीरगंज लैजानेक्रममा उनको बाटोमैं मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । लाश शल्यपरीक्षणको लागि नारायणी अस्पतालमा पठाइएको जिप्रका पर्साले जनाएको छ ।
असहायलाई व्हील चेयरसहित खाद्यान्न वितरण
प्रस, ठोरी, १४ असार/ ठोरी गाउँपालिका–१ स्थित वृद्धवृद्धा तथा असहाय कल्याण समाजमा आश्रित असहायहरूलाई शनिवार व्हील चेयरसहित खाद्यान्न वितरण गरिएको छ । लोगस नेपाल ललितपुरले आश्रममा कार्यक्रम आयोजना गरी २ थान ह्वील चेयरसहित खाद्यान्न वितरण गरेको थियो । वृद्धाश्रमका संरक्षक आशबहादुर गुरुङलाई वडाध्यक्ष रामप्रकाश कुँवर र संस्थाका प्रतिनिधिले उक्त सामग्री हस्तान्तरण गरेका थिए । आश्रमका असहायहरूलाई तीन महीनासम्म पुग्ने चामल, आलु, प्याज, चिनी, सुजीलगायतका खाद्यान्न हस्तान्तरण गरिएको वडाध्यक्ष कुँवरले बताए । संस्थाले १ लाख मूल्यबराबरको ३० बोरा चामल, ४ बोरा चिनी, ४ बोरा आलु, ३ बोरा प्याज, सुजी, बिस्कुट, फलपूmललगायतका खाद्यान्न उपलब्ध गराएको गुरुङले जानकारी दिए ।
गोली प्रहारबाट मजदूर घाइते
प्रस, वीरगंज, १४ असार/ सर्लाहीको लालबन्दीमा अज्ञात समूहको गोली प्रहारबाट एकजना मजदूर घाइते भएका छन् । लालबन्दी नगरपालिका–१, नवलपुर निवासी ३० वर्षीय जयनाथ महतोमाथि अज्ञात समूहले गोली प्रहार गरेको हो । आप्mनै वडामा पर्ने ब्रह्मस्थान मन्दिर निर्माणमा ज्यामीको काम गरिरहेका महतोलाई शनिवार दिउँसो मोटरसाइकलमा सवार दुईजनाले कार्यस्थलमा नै गोली प्रहार गरेका थिए । महतोको दाहिने पाखुरामा गोली लागेको छ । घाइते महतोलाई उपचारको लागि वीरगंज ल्याइएको प्रहरीले जनाएको छ । आक्रमणकारीको पहिचान तथा गोली प्रहारको कारण खुल्न सकेको छैन । महतोको परिवारजनका अनुसार आक्रमणकारी दुईजना महतोलाई खोज्दै पहिले उनको घर पुगेका थिए । जरुरी काम छ भेट्नुपर्ने भनेपछि परिवारजनले कार्यस्थल बताइदिएका थिए । छोटो हतियारबाट गोली प्रहार गरेपछि आक्रमणकारीहरू जङ्गलको बाटो हँुदै पूर्वतर्पm भागेको स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन् ।
६ सयजना ग्राहकको विद्युत् लाइन काटियो
प्रस, वीरगंज, १४ असार/ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वीरगंज वितरण केन्द्रले चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा विद्युत् महसुल नबुझाउने झन्डै ६ सय ग्राहकको विद्युत् लाइन काटेको छ । प्राधिकरणले बारा र पर्साका विभिन्न स्थानका ५९८ ग्राहकको विद्युत् लाइन काटेको केन्द्रका प्रमुख मुनिन्द्र ठाकुरले जानकारी दिएका छन् । लाइन काटन थालेपछि बक्यौतामध्येबाट ५ करोड १४ लाख रुपैयाँ असुल भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । वीरगंज वितरण केन्द्रले लामो समयदेखि विद्युत् महसुल तिर्न अटेरी गर्ने ग्राहकहरूलाई कालोसूचीमा राख्दै कारबाही गरिरहेको छ । पटकपटक बक्यौता महसुल असुलीको लागि ताकेता गर्दा पनि नउठेपछि लाइन काटेर कालोसूचीमा राखिएको केन्द्रका प्रमुख ठाकुरले बताए । कालोसूचीमा परेकाहरूबाट ३१ लाख ५४ हजार रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ । चालू आवको चैतसम्ममा प्राधिकरण वीरगंज वितरण केन्द्रले २ अर्ब ४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ विद्युत् महसुल उठाएको छ । शाखाले २ अर्ब ७५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बिलिङ गरेको थियो । यसमा सडकबत्तीलगायत अन्य विविधको पनि महसुल जोडिएकाले बढी बिलिङ देखिएको ठाकुरले बताए । यस अवधिमा विरतण केन्द्रले विद्युत् हुकिङ गर्
वीरगंजको विशिष्टतालाई खुइल्याउने नियत
ओमप्रकाश खनाल वीरगंजलाई आर्थिक गतिविधिको केन्द्र भनिन्छ । यहाँको अर्थ–सामाजिक दैनिकीले आर्थिक केन्द्र हुनुको अनुभूति पाएको भने छैन । यो अवस्था उत्पादनमा स्थानीय राजनीतिक अवयवको ओज मन्थन अलग, तर अनिवार्य विषय हो । वैदेशिक व्यापारका दृष्टिले तुलनात्मकरूपमा सहज भौगोलिक अवस्थितिमा रहनुकै कारण यो मुख्य नाका र आपूर्तिको मुहान बन्न पुगेको हो । वीरगंज आयात र निर्यातको मुख्य बिन्दु बन्नु राज्यको योजनाबद्ध प्रवद्र्धनको उपज होइन । जति पनि व्यापार लक्षित पूर्वाधार निर्माण भएका छन्, ती सबैको पछाडि वीरगंजको भौगोलिक अवस्थितिको दोहन मात्र उद्देश्य बनाइएको छ । यो तीतो लागे पनि यथार्थ हो कि, ती संरचनाको उपयोगका सकारात्मकभन्दा नकारात्मक पक्षसँग यहाँको दिनचर्या बढी साक्षात्कार भइराखेको छ । ढुवानीको चापले बाटो र वातावरण बिग्रिएको छ । वीरगंजको दैनिकीले यहाँको बाटो भएर जाने समृद्धिको अवसर उपयोग गर्न पाएको छैन । योजनामा राखिएका केही पूर्वाधारको र त्यही प्रकृतिका अन्यत्रका योजनाको गति हेर्दा राज्य सञ्चालनमा बसेकाहरूले बद्नियतपूर्ण तरीकाले ओझेलमा पार्न खोजेको त होइन ? भन्ने स्वाभाविक आशङ्का उत्पन्न हु
कर्म र भाग्य
केही गर्नुको नाम ‘कर्म’ हो तर जुन बुद्धिपूर्वक गरिन्छ, वास्तवमा कर्म त्यसैको नाम हो । त्यस्तै, कुनै पनि हरकतको नाम क्रिया हो । कर्म पनि एक क्रियारूप हो तर जुन क्रिया उद्देश्यपूर्वक गरिन्छ वा हुन्छ, त्यसैलाई वास्तवमा कर्म भनिन्छ । यो चार प्रकारको हुन्छ– १. शुक्ल, २. कृष्ण, ३ शुक्ल–कृष्ण, ४. अशुक्ल–कृष्ण । शुक्ल– जसले संसारमा सुखलाई उत्पन्न गर्छ, त्यो पुण्यरूप शुक्ल, स्वच्छ वा शुभ कर्म भनिन्छ । कृष्ण– जसले दुःख दिन्छ वा दुःख उत्पन्न गर्ने कर्म गर्छ वा हुन्छ, त्यो सब पाप–कर्मरूप कृष्णकर्म भनिन्छ । शुक्ल–कृष्ण– जुन मिश्रित कर्म पुण्य–पाप दुवै गर्छ, त्यसलाई शुक्ल–कृष्ण भनिन्छ । केही यसमध्ये धेरैको भलोको लागि गरिन्छ । त्यसमा सुख बढी, दुःख कम हुन्छ र जसमा आप्mनो सार्थ बढी, तर अरूको भलाई अल्प हुन्छ, यसबाट दुःख बढी हुन्छ, सुख कम । यो कर्म सबै शुक्ल–कृष्ण भनिन्छ । यस्ता कर्ममा हिंसा, असत्यादि–यो पापको अंश हो । तर अरूको हित पनि यसबाट भएको कारणले पुण्यरूप पनि छ । धेरैजनाको हितको लागि कसैले दुष्ट जीवलाई दण्ड दिन्छ । यसबाट धेरैजनाले सुख पाउँछन् । यस प्रकार पुण्यरूप र हिंसाबाट मिश्रित
२०७६ असार १४ गते शनिवारको प्रतीक दैनिक
सुरक्षा निकाय प्रदेश सरकार अन्तर्गत नहुँदा अधूरो –मुख्यमन्त्री
प्रस, वीरगंज, १३ असार/ मुख्यमन्त्री लालबाबू राउत गद्दीले सुरक्ष्Fा निकाय प्रदेश सरकार मातहतमा नभएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । सडक सभ्यता अभिवृद्धि एवं सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणमा समुदाय–प्रहरी साझेदारीसम्बन्धी एक दिवसीय ट्राफिक प्रहरी तथा सरोकारवालाहरूको सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री गद्दीले सुरक्ष्Fा निकायविना प्रदेश सरकार अधूरो भएको बताए । उनले सङ्घ सरकार अन्तर्गत हालसम्म प्रदेशको सुरक्ष्Fा निकाय परिचालित भएकोले प्रदेश सरकार अधूरो भएको तर्क दिए । मुख्यमन्त्री गद्दीले ट्राफिक नियम कानून पालना गर्ने कुरामा सबै सचेत हुनुपर्ने बताए । उनले ट्राफिक नियम कानून परिपालन गर्ने कुरामा प्रदेश सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रदेश सरकारले सडक सुरक्ष्Fा ऐन ल्याउन लागेको बताए । उनले ऐन दर्ता भइसकेको जानकारी गराए । कार्यक्रममा प्रदेशका प्रहरी प्रमुख प्रद्युम्न कार्की, वीरगंज महानगरका मेयर विजय सरावगी, पर्साका प्रजिअ नारायणप्रसाद भट्टराई, यातायात व्यवस्था कार्यालय, वीरगंजका प्रमुख रामअयोध्या राम, नेपाल पत्रकार महासङ्घ
न्यायमा बाह्य पहँुच विषयक अन्तक्र्रिया
प्रस, वीरगंज, १३ असार/ पर्सा जिल्ला अदालतले ‘न्यायमा बाह्य पहँुच’ कार्यक्रम अन्तर्गत शुक्रवार वीरगंज कलेजमा कानूनका विद्यार्थीसँग अन्तत्र्रिmया तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । ‘विगतको न्यायप्रणाली तथा अहिलेको न्यायप्रणाली’ विषयमा छलफल केन्द्रित थियो । वर्तमान संविधानले दिएको अधिकार सुनिश्चित गर्न अदालतले गरिरहेको कामकारबाईबारे विद्यार्थीलाई जानकारी गराइएको थियो । न्यायालय आपैंm रूपान्तरित हुँदै सर्वसाधारणहरूको न्यायमा सहज पहँुच बढाउने कार्ययोजना अन्तर्गत पर्साका सबै स्थानीय तहमा अन्तत्र्रिmया गरिसकेको पर्सा अदालतका न्यायाधीशहरूले जानकारी दिए । कानूनका विद्यार्थीहरूको लागि ‘अभ्यास अदालत’को पनि सोही कार्यक्रममा शुभारम्भ गरियो । पर्सा जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश लीलाराम अधिकारीको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा बालविवाह तथा घरेलु हिंसासम्बन्धी कार्यपत्र न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलले र अदालतको कामकारबाहीबारेमा कार्यपत्र न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा न्यायाधीश बद्रीप्रसाद ओली, कलेजका प्रिन्सिपल डा दीपेन्द्र चौधरी, अदालतका श्रेस
कुलोको निकास खुलेपछि डुबान हट्यो
प्रस, पर्सागढी, १३ असार/ पर्सागढी नगरपालिका–३ जनता रोडदेखि उत्तर सडकखण्डमा रहेको ह्युमपाइप पुरिदिएको कारण बीसौं बिघा खेत डुबानमा परेको थियो । स्थानीय बृजमोहन चौधरीले आप्mनो जग्गामा परेको भन्दै वर्षाअगाडि नै ह्युमपाइपको निकास बन्द गरेका थिए । स्थानीय किसानहरूले ह्युमपाइपको निकास बन्द गर्दा वर्षायाममा समस्या आइपर्ने भनेर वडाध्यक्ष र नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर समयमैं किसानहरूको गुनासोमा ध्यान नदिएको कारण गएराति परेको पानीले बीसौं बिघा खेत डुबानमा परेको थियो । किसानहरूले आज शुक्रवार बिहान खेत डुबानमा परेपछि वडाध्यक्ष्F उद्धवबहादुर उप्रेतीलाई पुनः गुहार गरेका थिए । यसैगरी, किसानहरूले मेयर लोकनारायण यादवलाई निकास खोल्न आग्रह गरेको र मेयरको आदेशमा करीब साढे ११ बजे निकास खोलिएको थियो । ह्युमपाइपको निकास खोलिएपछि खेतमा जमेको पानी बगेको र किसानले रोपेको धानको बीउ सुरक्ष्Fित भएको छ ।
आयुर्वेद पद्धतिबारे विचारगोष्ठी
प्रस, वीरगंज, १३ असार/ भारतीय महावाणिज्य दूतावास, वीरगंजको सहयोगमा ब्रह्मभूमि हेल्थ रिसर्च सेन्टर, मलङ्गवाको आयोजनामा शुक्रवार वीरगंजमा आयुर्वेदको अवसर तथा चुनौती विषयमा गोष्ठी भएको छ । गोष्ठीको उद्घाटन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान दिल्लीका प्रा पिके प्रजापतिले आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोग स्वास्थ्यको लागि उपयुक्त भएको दाबी गरे । उनले आयुर्वेदिक उपचार पद्धति विश्वमैं लोकप्रिय हुँदै गएको बताए । उनले योग विधासँग जोडेर आयुर्वेदिक पद्धतिबाट हुने उपचार निकै फलदायी भएको र यसप्रति आममानिसको आकर्षण बढेको बताए । उनले प्लास्टिकको बोतलमा पिउने पानीको प्रयोग विश्वका समृद्ध देशहरूबाट हराइरहेको अवस्थामा भारत, नेपालमा यसको प्रयोग बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनले पानीको शुद्धीकरण आयुर्वेदिक पद्धतिबाट पनि उपचार गर्न सकिने बताए । कम खर्चमा यो विधि प्रयोग गर्न सकिने हुनाले मिनरल वाटरको प्रयोग अबको दिनमा आवश्यक नरहेको बताए । पेट्रोलियम पदार्थसरह पानीको पनि आगामी दिनमा अभाव हुनेतर्पm सङ्केत गरे । उनले जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै पानीको खपतमा व्यापक वृद्धि भइरहेकोले आगामी दि
वडामा योजनाको चाङ, बजेटको सीमा न्यून
प्रस, ठोरी, १३ असार/ ठोरी गाउँपालिका वडा नं १ को तेस्रो वडासभा शुक्रवार सम्पन्न भएको छ । सरस्वती चोकस्थित वडा कार्यालयमा आयोजित सभामा स्थानीयले आआप्mनो टोलबस्तीबाट योजना सङ्कलन गरेर ल्याएका थिए । यसरी ल्याइएको योजना गापाले वडालाई तोकिदिएको बजेटको सिलिङभन्दा धेरै बढी देखिएको सभाका सहभागीहरूले बताए । वडाबासीले आआप्mनो टोल क्षेत्रका अति आवश्यक योजनाहरू वडासभामा पेश गरेको वडाध्यक्ष रामप्रकाश कुँवरले बताए । वडाले ५०–६० लाख रुपैयाँको सीमाभित्र रहेर योजना छनोट गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकोले विशेष प्राथमिकताको आधारमा योजना छनोट गरिने उनले बताए । सो अवसरमा वडाध्यक्ष कुँवरले वडास्तरमा सङ्कलित योजनालाई सम्बोधन गर्नका लागि वडा, गाउँपालिका, प्रदेश र केन्द्रीय तहसम्म समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताए । कार्यक्रमका अधिकांश वक्ताहरूले वडाको आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकीकरण गरी योजनाहरू छनोट हुन सके वडाको समृद्धि र दिगो विकास हुने सुझाव दिएका थिए । सभामा स्थानीय बुद्धिजीवी टकबहादुर थापा, केशवप्रसाद रेग्मी, घनश्याम अधिकारी, सञ्चारकर्मी प्रेम लामा, सुशील अधिकारीलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । व
पर्सागढीमा विनियोजन विधेयकमाथि छलफल
नरेश यादव, पर्सागढी, १३ असार/ पर्सागढी नगरपालिकाको तेस्रो नगरसभा अन्तर्गत शुक्रवारको बैठकमा आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक २०७६ माथि छलफल भएको छ । नगरप्रमुख लोकनारायण यादवको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको बैठकमा नगरका विभिन्न विषयगत समितिहरूको विषयगत रायसहित प्रतिवेदन असार १७ गते बिहान ११ बजेभित्र सभाध्यक्षको सचिवालय वा नगरपालिकामा दर्ता गराउन सबै विषयगत समितिका संयोजकहरूलाई आजको बैठकले निर्देशन दिने निर्णय गरेको प्रमुख यादवले बताए । अर्को बैठक असार १९ गते ११ बजे बस्ने तय भएको छ । यसैबीच, नगरका कर्मचारीहरूले उपप्रमुख अर्चना चौधरीबाट कर्मचारीमाथि अभद्र व्यवहार भएको भन्दै खेद प्रस्ताव पारित गरेको छ । उनीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत तय गरेका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद चापागाईंको अध्यक्षतामा आज बसेको नगरका कर्मचारीहरूको बैठकले खेद प्रस्ताव पारित गरेको हो । असार १० गते नगरसभा प्रारम्भ सम्बन्धमा नगरका सूचना प्राविधिक ऋषि दासले नगरपालिकाको आधिकारिक फेसबूक पेजमा राखेको पोस्टलाई लिएर नगर उपप्रमुख चौधरीले नगरसभा भइरहेकै बेला प्राविधिक दासलाई अभद्र व्यवहार गरेको कर्मच
विजयबस्ती माविका सुदीप ‘ठोरी टप’
प्रस, ठोरी, १३ असार/ माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) २०७५ मा साधारणधारतर्पm विजयबस्ती माविका सुदीप श्रेष्ठ ठोरी गाउँपालिकामा प्रथम भएका छन् । श्रेष्ठले ‘बी प्लस ग्रेड’ अर्थात् ३.२० जिपिए ल्याइ ‘ठोरी टप’ हुन सफल भएका हुन् । ठोरी गाउँपालिकामा पाँचवटा माध्यमिक विद्यालयहरू छन् । ठोरीमा ‘बी प्लस’ ल्याउने विद्यार्थी श्रेष्ठ मात्रै हुन् । ठोरी–४ स्थित विजयबस्ती माविका प्रअ नारायण लामाका अनुसार सो विद्यालयबाट ३७ जनाले एसइई परीक्षा दिएकोमा चारजनाले २.०५–२.४०, १६ जनाले १.६५–२.० र १६ जनाले १.२५–१.६० जिपिए ल्याएका छन् । ठोरी गाउँपालिका–२ मा रहेको सरस्वती माविका ९ जनाले ‘बी’ ग्रेड अर्थात् २.४५–२.८० जिपिए ल्याउन सफल भएको प्रधानाध्यापक केशवप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । रेग्मीका अनुसार १४ जनाले २.०५–२.४०, ३८ जनाले १.६५–२.०, ९ जनाले १.२५–१.६० र १ जनाले ०.८५–१.२० जिपिए ल्याएका छन् । त्यसैगरी, ठोरी गाउँपालिका–१ स्थित नेपाल राष्ट्रिय प्राविधिक मावि दीपकनगरका दुईजना विद्यार्थीले ‘बी’ ग्रेड अर्थात् २.४५–२.८० जिपिए ल्याउन सफल भएको प्रधानाध्यापक निरञ्जन श्रीवास्तवले जानकारी दिए । श्री
रङ्गदारी उठाएको अभियोगमा चारजना पक्राउ
प्रस, वीरगंज, १३ असार/ जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले आइसिपी गेटमा रङ्गदारी उठाएको आरोपमा चारजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा श्रीसिया निवासी रमेशकुमार पटेल, लालुकुमार पटेल, राजुकुमार द्विवेदी र बहुदरमाई नपा निवासी विनयकुमार ओझा रहेको प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरूले भारतबाट आउने सवारीसाधनबाट पार्किड्ढो नाममा प्रतिट्रक ३ सय रुपैयाँ उठाइरहेको सूचना पाएपछि प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । सडकछेउमा टहरा बनाइ विना रसिद ट्रकसँग रकम उठाएको अनुसन्धानबाट खुलेको र पक्राउ परेका चारैजनाविरुद्ध सार्वजनिक अपराध मुद्दा दर्ता भएको जिप्रका पर्साले जनाएको छ ।
एक व्यक्ति दुई बिरुवा रोप्ने अभियान शुरू
प्रस, वीरगंज, १३ असार/ नेपाल सरकारको ‘एक व्यक्ति दुई बिरुवा’ लगाउने अभियान अन्तर्गत शुक्रवार जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–५ बकुलियामा वृक्षरोपण भएको छ । बकुलिया क्याम्पस प्राङ्गणमा वडाध्यक्ष मोहित चौधरी, क्याम्पस अध्यक्ष देवनारायण चौधरीलगायतले वृक्षरोपण गरी अभियान शुरू गरेका हुन् । क्याम्पस अध्यक्ष चौधरीले वडाका सार्वजनिक, पायक पर्ने जग्गामा वृक्ष्Fरोपण जारी रहने बताए । वडाध्यक्ष्F चौधरीले प्राकृतिक प्रकोप, हावाहुरी, गर्मीले जनजीवन प्रभावित भएको बताए । उनले औद्योगिक प्रदूषणले खेतीपाती, अन्न उपज, जनजीवन प्रभावित भएकोले आजैदेखि वृक्षरोपण अभियान शुरू भएको बताए ।
एक सातामा दुईवटा बलात्कारका घटना बाहिरियो, बुबाछोरा मिलेर १२ वर्षीया बालिकाको बलात्कार
प्रस, परवानीपुर, १३ असार/ बारामा एक साताभित्रै दुईवटा बलात्कारका घटना भएका छन् । १४ वर्षीया बालिकालाई आप्mनै बुबाले बलात्कार गरेको घटना सेलाउन नपाउँदै अर्काे घटना सतहमा आएको छ । पहिलो र दोस्रो घटना बारा निजगढ नगरपालिकाभित्र भएको हो । पहिलो घटनामा आप्mनै घरमा सुतिरहेको अवस्थामा रक्सी खाएर ४२ वर्षीय बुबा तीर्थबहादुर सुनारले आप्mनै छोरीको बलात्कार गरेका थिए । फेरि अर्को घटना सार्वजनिक भएको छ । बुबा र छोरा मिलेर एक १२ वर्षीया बालिकालाई विगत डेढ वर्षदेखि आलोपालो बलात्कार गर्दै आएको खुलासा भएको बारा प्रहरीले जनाएको छ । निजगढ नगरपालिका वडा नं ४ कछडिया टोल बस्ने वर्ष ४० का मीनबहादुर माझी र १९ वर्षीय रिकेश माझीलाई इलाका प्रहरी कार्यालयले जबरजस्ती करणीको आरोपमा ५ दिनको म्याद थमाइ अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ । पीडितको परिवारले असार ११ गते प्रहरीमा जाहेरी दिएको थियो । जाहेरीको आधारमा सोही दिन अभियुक्त दुवैजनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको इप्रका निजगढका प्रहरी नायब निरीक्षक विजयदास बानियाँले जानकारी गराए । पीडित बालिका पक्राउ परेका मीनबहादुरको काकाकी छोरी अर्थात् बह
उमाशङ्कर द्विवेदी भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा र कृतवर्मा आदि क्रोधमा भरिएर युद्ध गर्न थालेपछि पाण्डवको सेनाको संहार हुन थाल्दथ्यो र पाण्डवहरू क्रोधित भएर युद्ध गर्न थाल्दा तपाईंको सेनाको संहार हुन थाल्दथ्यो । यस प्रकार दुवै सेनाको संहार जारी थियो । सञ्जयले भने– जुन बेला बडो बडो वीरहरूको विनाश गर्ने त्यो भयङ्कर संग्राम जारी थियो, शकुनिले पाण्डवहरूमाथि धावा गरे । उनको साथमा ठूलो सेनाको डप्mफाको साथमा कृतवर्मा पनि थिए । यिनीहरूको सामना गर्नको लागि अर्जुनका पुत्र इरावान् आए । इरावान्को जन्म नागकन्याको गर्भबाट भएको थियो । उनी धेरै बलवान् थिए । शकुनि तथा गन्धार देशका अनान्य वीर पाण्डवसेनाको व्यूह भङ्ग गरेर त्यसभित्र पसेपछि इरावान्ले आप्mना योद्धाहरूसित भने– वीरहरू हो, यस्तो युक्ति गरौं, जसबाट यी कौरव योद्धाहरू आज आप्mना सहायकहरूका साथ र वाहनसहित मारिऊन् । इरावान्का सैनिकहरू– ‘बेस’ भन्दै कौरवहरूको दुर्जय सैनिकमाथि जाइलागे र उनीहरूको सेनालाई मारेर सोत्तर पार्न थाले । आप्mनो सेनाको यो विध्वंसलाई सुबलका पुत्रहरूले सहन गर्न सकेनन् । उनीहरूले दौडेर इरावान्लाई चारैतिरबाट घेरामा हालेर उन
को बन्छ करोडपति ? सांसद बन्छ करोडपति
कुमार रुपाखेती अमिताभ बच्चनको ‘कौन बनेगा करोडपति’ अथवा राजेश हमालको ‘को बन्छ करोगपति’को हटसिटमा बस्न राम्रो अध्ययन, समसामयिक घटनाबारे जानकारी, इतिहासको ज्ञान, सामान्यज्ञान आदिमा पोख्त हुन जरुरी हुन्छ । राम्रै पढाकुहरूले समेत करोड रुपैयाँ जित्न जितोड मेहनत गर्छन् र केही भाग्यमानीले मात्र सबै प्रश्नहरूको सही जवाफ दिएर करोडपति बन्छन् । तर हाम्रा भाग्यमानी सांसदहरूले अलि होहल्ला, टेबुल ठोकाइ गरेर विनामेहनत करोडपति बन्ने सौभाग्य पाएका छन् । करोडपति मात्र नभै ६ करोडपति बनेका छन् । विकास निर्माण गर्न रकम छैन भन्ने गरीब सरकारले नवधनाढ्य सांसदहरूका लागि लखटिया (१ लाख पर्र्ने) ल्यापटप समेत दाइजो दिने भएको छ । को बन्छ करोडपतिमा भाग्यले एकजना मात्र करोडपति बन्दछ भने यहाँ त एकमुस्ट होलसेलमा ३३४ सांसदको तालुमा आलु फल्दैछ । नेपालको सङ्घीय संसद्ले यी दुईवटा सुविधा घोषणा नगरून्जेल विचरा सांसदहरूको दिनको चैन र रातको निद्रा हराम भएको थियो । निर्वाचन क्षेत्र विकासको नाममा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रत्येक सांसदको टाउको गन्तीका हिसाबले बजेट छुट्याइएको छ । अब भन्नुस् बच्चन र हमालको हटसिटभन्दा हाम्
सञ्जय मित्र आमन्त्रित म पनि थिएँ, नेपालकै एउटा प्रदेश राजधानीमा हिन्दी भाषाको राष्ट्रिय कार्यक्रममा । कार्यक्रममा नमस्कार गरेपछि फर्काउनुपर्ला अनि हीनताबोध हुन्छ कि भन्ने सोचेर एकजना साहित्यकार अग्रजले मतिरबाट आँखा अर्कैतिर फर्काए । भाव बुझेर अलि धेरैले सुन्ने गरी मैले नमस्कार अभिवादन गरें । पहिलोपटकको अभिवादनलाई नसुनेभैंm वा अरूलाई नै गरेको हो कि भन्ने परेको बुझाउनलाई केही प्रतिक्रिया जनाएनन् । दोस्रोपटक नाम नै काढेर अझ अलि बढीले सुन्ने गरी अभिवादन गरेपछि हेपेर फर्काएको भावमा हेर्दै नहेरी अँध्यारो मुखले टाउको हल्लाए । म आदरै गर्छु । जहाँ देखें पनि डेढ दशकदेखि नमस्कार गर्दै आएको छु । सम्मानित हुन थालेको भनेर उनले धेरैलाई सुनाएको सुनें । खुशीको कुरा थियो । राष्ट्रियस्तरको कार्यक्रममा सम्मान पाउनु चानचुने कुरा होइन । यस खुशीमा आप्mनो एउटा पुस्तक धेरैलाई उपहार दिनु पनि स्वाभाविक हो । सबैलाई एउटा/एउटा किताब उपहारमा दिंदा सबैमा सही गर्न भ्याउनु मुस्किलै हुन्छ । प्रफुल्लित यस मानेमा पनि छन् कि धेरैले पुस्तक मागिरहेका छन् । अध्ययन त मलाई पनि गर्न मन लाग्छ तर यसअघिका उनका केह
ग्रेडलाई प्रमुख ठानी छोराछोरीलाई तनाव दिनु बुद्धिमानी होइन
वैद्यनाथ ठाकुर एसइईको नतिजा प्रकाशन भइसकेको छ । परीक्षार्थी परिवारमा खुशियाली तथा तनाव दुवै मिश्रित अवस्था देखिंदैछ । जसको बच्चाले ‘ए प्लस’, ‘ए’ वा ‘बी प्लस’सम्म ल्याएका छन्, तिनीहरू लडडु बाँड्दैछन् । घरपरिवारमा निकै नै खुशीको माहोल छ तर जसको घरमा ‘बी’ देखि ‘डी’सम्मका श्रेणी आएको छ, त्यहाँ खुशी कम बढी तनावको अवस्था उत्पन्न भएको छ । अभिभावकहरूले नानीबाबुहरूलाई पढ्ने बेलामा ध्यान नदिएको, बढीजसो खेलकूदमा समय बिताएको, खराब साथीको सङ्गतमा परेको जस्तो आक्रोशपूर्ण गुनासो गरेर घरभित्र यतिबेला तनाव सृजना गरेको देखिन्छ । यसो गर्नु उचित होइन । यतिबेला नानीबाबुहरूलाई गालीभन्दा पनि राम्रो परामर्शको आवश्यकता छ । ठीकै छ अब एघार र बा¥ह कक्षामा अलि बढी मेहनत गरे सबै कुरा राम्रो भइहाल्छ भन्ने सल्लाहसुझावको जरुरी छ । विद्यार्थीले समयमा राम्रोसँग नपढेको होला तर पनि यतिबेला त्यो कुरा कोट्याउनुको कुनै अर्थ छैन । नानीबाबुको परीक्षाफल बिग्रिनुमा जति दोषी विद्यार्थी छन्, त्योभन्दा कम्ती दोषी अभिभावक तथा विद्यालय प्रशासन र स्वयम् शिक्षा मन्त्रालय पनि छैनन् । विद्यालयहरूमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । दर
बजेट रोकिएला नि
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीहरू कति सक्षम छन् भन्ने कसी लगाउन अब सजिलो भएको छ । विगतमा गफ दिन वा भाषण गर्न चतुर अर्थात् वाकपटुहरू उत्तम ठहर्थे । यसो हुँदा काम गर्ने तर गफ दिन नजान्नेहरूको मूल्याङ्कन थिएन । काम गर्नेहरूको मापन हुने खासै मापदण्ड पनि थिएन । तर अब भने काम नगर्ने गफ मात्र गर्नेहरू मतदाताको बीचमा नराम्ररी नाङ्गिने अवस्था आएको छ । अल्छी जनप्रतिनिधि वा कर्मचारी रहेको स्थानीय तहको बजेट कटौती हुने, रोक्का गरिनेलगायतका सूत्र लगाउन सङ्घीय सरकारले शुरू गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई तीन दिनभित्र आव २०७६/०७७ को बजेट विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ । असार १२ गते मन्त्रालयले सो निर्देशन जारी गरेको हो । यसअघि असार १० गतेभित्र आगामी आवको बजेट तथा राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा/नगरसभाबाट पारित गरिसक्न अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले तोकिएको समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहमा सङ्घीय सरकारबाट जाने निकासा रोकिने चेतावनीसमेत दिएको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, दफा ७१ को उपदफा १ तथा अन्तरसरकारी वित
२०७६ असार १३ गते शुक्रवारको प्रतीक दैनिक
जुनेली रातमा बिस्कुन सुकाउने महानगरको चाला, सात दिनभित्र डेढ करोड खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता
प्रस, वीरगंज, १२ असार/ वीरगंज महानगरपालिकाले सात दिनमा खर्च गर्नेगरी रु १ करोड ७० लाख विभिन्न विद्यालयमा पठाएको समाचार प्राप्त भएको छ । महानगरले आव २०७५–०७६ मा शिक्ष्Fा विकासको लागि रु २ करोड छुट्याएकोमा सो रकम आवको अन्तिम समय हिजो ३१ वटा विद्यालयमा पठाएको देखिन्छ । अधूरो भवन, बाउन्ड्री वाल, सेनेटरी प्याड, बायोमेट्रीलगायत काम गर्न सो रकम महानगरले विनियोजित गरेको थियो । चार महीना अघि शिक्ष्Fा महाशाखाले सम्बन्धित विद्यालयमा के काम गर्न सकिन्छ भनेर स्टिमेट तयार पारी फाइल लेखा शाखामा दिए तापनि चार महीनादेखि फाइल रोकेर राखिएको थियो । मनपामा रहेका आसेपासेहरूले कोटेशनमार्पmत सो काम गराउन दबाब दिंदै आएको तर सम्बन्धित विद्यालयले आपैm खर्च गर्ने र बाँकी हुने रकमले अन्य काम गर्ने विषयमा सहमति नजुटेपछि चार महीनादेखि फाइल रोकिएको थियो । रकम फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेपछि एक साताको समयमा मनपाले सो रकम पठाएपछि समस्या भएको एक शिक्ष्Fकले बताए । ती शिक्ष्Fकका अनुसार सेनेटरी प्याड बनाउने मेशिनको लागि रु ३१ लाख महाशाखाले रोकेर राखेको छ । सीधा निकासा दिने रकमलाई पेश्की दिएर पुनः चलखेल भइरहेको उन
वीरगंजमा ११ वर्षीया बालिकाको बलात्कार, केटा फरार
राधेश्याम पटेल, परवानीपुर, १२ असार/ गएराति वीरगंजमा एउटी ११ वर्षीया बालिकाको बलात्कार भएको घटना सार्वजनिक भएको छ । वीरगंज महानगरपालिका–२७ उदयपुरघुर्मीका राकेश यादव बालिकाको बलात्कार गरेर फरार भएका हुन् । छिमेकी राकेशले जन्ती हेर्न आएकी बालिकालाई शुरूमा जिस्काएको र पछि जबरजस्ती करणी गरेको प्रहरीमा उजूरी परेको पर्सा प्रहरीका डिएसपी अनन्तराम शर्माले बताए । उनले पीडित पक्षको बयान र उजूरी लिई अनुसन्धान थालेको बताए । “रेप घटना हो, हामी कानूनी सबै प्रक्रिया पूरा गरी अनुसन्धान गरिरहेका छौ”–पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक शर्माले भने–“घटनामा संलग्न केटा फरार छ, उसको बुवाको मृत्यु भइसकेको छ, केटाको खोजी गरिरहेका छौं ।” प्रहरीले पीडित बालिकाको मेडिकल जाँच गराई परिवारजनको जिम्मा लगाएको छ । घटनापछि गाउँका शिक्षक साहेब यादवले दुवै पक्षलाई मिलापत्र गराउन गाउँमै पञ्चायती गरी घटना गोप्य राखेको आरोपमा पर्सा प्रहरीले पक्राउ गरी केरकार गरी रिहा गरेको छ । तारेखमा उनलाई रिहा गरेको पर्सा प्रहरीले जनाएको छ । पीडित परिवारजनले गाउँलेको प्रभावमा आएर पीडित बालिकालाई मामा घर आदर्शनगर पु¥याएका थिए ।
पीपलको रूख हेर्न हजारौको भीड, हुरीमा ढलेको रूख रातारात उठ्यो
प्रस, परवानीपुर, १२ असार/ वीरगंज–१८ भवानीपुरमा एउटा पीपलको रूख हेर्न हजारौंको भीड लाग्न थालेको छ । हिजोसम्म भुइँमा ढलेको रूख रातारात ठडिएपछि गाउँलेहरूको ध्यान पीपलको तानेको छ । गत चैत १७ गते आएको विनाशकारी हावाहुरीमा परी उक्त ५० वर्ष पुरानो रूख ढलेको थियो । इनर्वाका रामानन्दराउत कुर्मीको खेतमा रहेको उक्त रूखको हाँगा हिजो बिक्रीको लागि काटिएको थियो । रूख ढल्दा रूखको रूटक्याप अर्थात् मूल जरासँगै सहायक जराहरू पनि उखेलिएको अवस्थामा अचानक रूख खडा भएपछि गाउँलेहरू अचम्ममा परेका छन् । जगरनाथपुर–इनर्वा सडक पूर्व भवानीपुरको सरेहमा पर्ने उक्त रूखको आज बिहानदेखि पूजापाठ शुरू गरिएको छ । पीपललाई वासुदेव र ब्रहमबाबाको रूपमा पूजापाठ गर्ने गरिएकोले गाउँलेहरूको रूख हेर्न र पूजा गर्न घुइँचो लागेको छ ।
घूस रकमसहित कुशवाहा पक्राउ
प्रस, कलैया (बारा), १२ असार/ परसौनी–१ बस्ने आसपुरन कुशवाहालाई घूस रकमसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले बिहीवार नियन्त्रणमा लिएको छ । सेवाग्रहीबाट लिएको रु १५ हजार घूससहित कुशवाहालाई पक्राउ गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौंडाका अधिकृत कृष्ण सुवेदीले बताए । कुशवाहाले आपूmलाई परसौनी गाउँपालिकाका योजना शाखा प्रमुख विनोद यादवको सहयोगी बताएर सेवाग्रहीबाट घूस रकम असुलेका थिए । कुशवाहा रकम लिंदै गर्दा पक्राउ परेका अख्तियारले जनाएको छ । सहयोगी पक्राउ परेपछि शाखा प्रमुख यादव कार्यालय छोडेर फरार भएको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन् । पक्राउ परेका कुशवाहालाई आयोगको टोलीले अनुसन्धानको लागि हेटौंडा लगेको छ । शाखा प्रमुख यादवको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
दलित समुदायको सशक्तीकरणमा गैरदलितको भूमिका विषयक अन्तत्र्रिmया
प्रस, ठोरी, १२ असार/ ठोरी गाउँपालिका–४ निर्मलबस्तीमा सामाजिक रूपान्तरणका लागि दलित समुदाय सशक्तीकरणमा गैरदलित समुदायको भूमिका विषायक अन्तक्र्रिया बिहीवार सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रमका बोल्ने अधिकाँश वक्ताहरूले पुरातनवादी जातीय सोच त्यागेर सामाजिक परिवर्तन गर्न सबै समुदायको समान भूमिका आवश्यक रहेको बताएका थिए । दलित समुदायको सशक्तीकरणमा गैरदलितहरूको भूमिका सकारात्मक बनेमात्रै सुन्दर समाजको परिकल्पना गर्न सकिने कुरामा वक्ताहरूले जोड दिएका थिए । कार्यक्रममा ठोरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष पद्मलाल श्रेष्ठले पुरातनवादी धार्मिक सोचको आडमा समाजमा छुवाछूत विद्यमान रहेको भए पनि त्यस्ता कुप्रथाको अन्त्य गरिने बताएका थिए । वडाध्यक्ष वईबहादुर पाख्रिन, नेकपा ठोरीका राम श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेसका हरि सिलवाल, समाजसेवी टोपनाथ घिमिरे, सामाजिक कार्यकर्ता रञ्जित कार्कीलगायतले दलित अधिकारबारे आआप्mनो धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा दलित समुदायका अगुवाहरूले दलित समुदायको उत्थानका लागि गैरदलित समुदायको रचनात्मक भूमिका हुनुपर्ने बताएका थिए । स्थानीय शिक्षक एवं दलित अगुवा हरि दर्जीले स्व
सञ्चय कोषद्वारा प्रदान गरिने सुविधा विषयक अन्तक्र्रिया
प्रस, वीरगंज, १२ असार/ कर्मचारी सञ्चय कोष, हेटौंडाको आयोजनामा कोषको सेवा सुविधा, समसामयिक विषय र फाँटवारीसम्बन्धी एक दिने अन्तत्र्रिmया वीरगंजमा सम्पन्न भएको छ । त्रिजुद्ध माविको सभाहलमा सम्पन्न कार्यक्रममा अहिलेसम्म कोषले नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूलाई केकस्तो सहयोग गर्दै आएको छ भन्ने विषयमा प्रकाश पारेको थियो । कार्यालय प्रमुख सागरकुमार सिंहले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूको श्रमबाट स्थापित कर्मचारी सञ्चय कोष अहिले विभिन्न सेवा सुविधा लिएर आएको बताए । संविधानले तोकेको अधिकार सुनिश्चित गर्दै कोषले देशभरिका कर्मचारीलाई विभिन्न किसिमका ऋण दिने, बिरामी भएमा उपचार खर्च, अन्य सेवा सुविधा दिने विषयमा प्रस्ट पारेका थिए । कार्यालय प्रमुख सिंहको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा सहायक प्रजिअ नेत्रबहादुर शर्मा, कोष नियन्त्रण लक्ष्मीप्रसाद पौडेल, शिक्ष्Fा महाशाखाका प्रमुख अरविन्दलाल कर्ण, हरेन्द्र कुर्मीलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा कार्यालय प्रमुख, लेखा अधिकृत, सञ्चयकर्तालगायतको उपस्थिति थियो ।
स्वरोजगारी महिलाहरूको उत्पादन प्रवद्र्धन मेलाको समापन
प्रस, वीरगंज, १२ असार/ घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, पर्सा, वीरगंजको आयोजनामा रानीसति अतिथि सदन वीरगंजमा सञ्चालित पाँच दिने बजार मेला व्यावसायिक उत्सवको आज समापन भएको छ । मेला समापन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समिति, पर्साका संयोजक नेकमहम्मद मियाँले महिला उद्यमशीलतालाई लक्षित गरेर आयोजना गरिएको मेला फलदायी साबित भएको दाबी गरे । उनले महिलाहरूले आप्mनो सीप मेलामार्पmत बजारमा ल्याउने अवसर पाएको बताए । उनले सीप सिकेका महिलाहरूलाई आप्mनो उत्पादन घर व्यवहार, बजारमा ल्याउँदा लाभदायी हुने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घ, पर्साका अध्यक्ष्F श्याम बन्जाराले सीप अनुसार उत्पादन कार्यमा संलग्न रहन सुझाव दिए । उनले महिलाहरूले विभिन्न सीपको तालीम लिने तर व्यवहारमा लागू नगर्दा तालीम फलदायी नभएको र सीप बाँझो लागेको बताए । वुमन स्किल सेन्टरकी अध्यक्ष्F चञ्चला दासले बजार मेला व्यावसायिक मेलाले महिला उद्यमीहरूलाई ऊर्जा प्राप्त भएको बताइन् । उनले पहिलो मेला भएकोले उत्साहप्रदरूपमा बिक्री–व्यवसाय नभए तापनि महिलाहरूले उत्पादन गरेको सामग्रीको अवलोकन गरी उनीह
कमिसनको कुरा नमिल्दा बिल भुक्तानी प्रक्रिया अवरुद्ध
प्रस, वीरगंज, १२ असार/ पोखरिया नगरपालिकाले सडक मरम्मतको नाउँमा लाखौ रुपियाँ हिनामिना गरेको प्रमाण भेटिएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरियादेखि बसन्तपुरसम्म तथा पोखरिया विद्युत् प्राधिकरणको कार्यलयदेखि मसिहानी नहरसम्म मरम्मत गरी सडक बोर्डको ३० लाख तथा अन्य शीर्षकबाट २० लाख गरी ५० लाख खर्चिएको पाइएको छ । सामान्य खाल्टाखुल्टी पुर्नुका साथै स्काभेटर लगाएर बाटो सम्याएबापत सो रकम सिध्याएको बुझिएको छ । बाटोको पुरानो ग्रेभल स्काभेटरले खनेर खाल्टाखुल्टी पुरिएको भएपनि सयौ टिपर–ट्याक्टर गिट्टी, बालुवा, ग्रेभलको नक्कली बिल बनाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत सो काम गराएका देखिन्छ जबकि खरीद ऐन अनुसार उपभोक्तामार्फत हुने काममा मेशिन औजार प्रयोग गर्न पाइँदैन । प्राविधिक तथा उपभोक्ताबीच लेनदेनको कुरा नमिल्दा अहिलेसम्म बिल भुक्तानी भएको छैन । सो कार्यलयमा कार्यरत एक प्राविधिकका अनुसार दुई लाखको गिट्टी बालुवासमेत खर्च भएको छैन, स्काभेटरले नै सबै काम गराएको पनि बताए । नक्कली बिल बनाएको भन्दै साइड हेर्ने ओभरसियरले बढी कमिशन माग्दा विवाद उत्पन्न भएको छ । यस विषयमा पोख